Waalidka iibsada cashar ka caawinta ilmaha oo soo batey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Waalidka iibsada cashar ka caawinta ilmaha oo soo batey
La daabacay tisdag 27 augusti 2013 kl 16.13
Waalidiinta caruurta u qabta macallin ka caawiya casharada kabacdiina ka qarashka ka jara canshuurta ayaa waddankan Iswiidhen ku soo batey. Shirkadaha ka shaqeysta casnhar iibinta ayaa sidoo kale waxaa kordhey dakhliga soo galaya kaas oo kor u kacey boqolkii 41 sannad gudahiis. Laakiin waxa jira welwel laga qabo arintan oo ah in uu kordho farqiga u dhaxeeya ardeyda iskuulka. Anna Ekström waa agaasimaha guud ee hey'ada iskuulka.
- Dabcan waa arin fiican in ardey badan laga caawiyo casharada si ay u gaaraan hadafkooda. Laakiin waxaa sidoo kale dhankeedajira qatar, taasna waxa weeye in hanaanka cashar ka caawinta ay ka faa'ideystaan keliya waalidka ku firfircoon arimaha iskuulka ilmahooda. Waxaan qabaa in ardeyda iskuulka ka helaan caawinta ay u baahan yahiin si ay u gaaraan hadefa waxbarashada, xataa ardeyda aysan waalidkooda ku firfircooneyn iskuulka ilmahooda si ay uga helaan iskuulka fursad nolaleed oo isku mid ah, ayey tir.
Waagii hore canshuur ka jarida qarashka rut waxuu keliya taabanayey caruur ilaalinta qof loo keensado oo xataa ay ku jirtey casnhar ka caawinta. Laakiin laga bilaabo dhamaadkii sannadkii hore ayaa ardeyda dhigata dugsiga sare canshar ka caawintooda laga dhigey wax qarashka ku baxa laga jari karo canshuurta dakhliga ruuxa laga qaado sannad kasta.
Waxaana hada cirka isku shareerey cashar ka caawinta ay shirkadahu iibinayaan. Sannadkii hore ayaa afarta shirkadood ee ugu waaweyn ee cashar ka caawinta bixiya ayuu dakhliga ay gadeen kordhey boqolki 41 halka sanno gudaheed, sida uu qorey wargeyska Svenska Dagbladet
Ma jiraan weli baaritaano lagu sameeyey farqi natiijo ee u dhaxeyn kara ardeyda ay waalidiintooda si firfircoon ugu dooraan cashar ka caawinta iyo ardeyda waalidiintooda sidaas sameynin. Madaamada hanaankan la hirgeliyey waqti aan sidaa u horeynin. Laakiin baaritaano ay horey u sammeysey hey'ada Skolverket ayaa muujiyey in sannadyo badan natiijada iskuulada Iswiidhen ay aad hoos ugu sii dhacayeen, sidoo kalena farqiga u dhaxeeya ardeyda uu sii kordhahayey.
Sidas darteed ayaa hey'ada Skolverket uga digtey in farqiga uu sidii hore ka sii weynaado markii hanaankan Läxhjälp uu marayey talo ka soo baxinta.
- Baaritaano waxey muujinayaan in natiijada iskuulada Iswiidhen ay hoos u dhacdey, waxeyn sidoo kale muujinayaan in uu gabaabsi ka jiro dhanka iskumid ahaanshaha oo farqiga sii krodhahayo. labadaas arina waa kuwo qatartooda leh ayaan aaminsannahey. Markii talo ka soo baxinta lagu hayey hanaanka Läxhjälp-rut (cashar ka caawinta canshuurta laga jaro) waxaan sheegney in aan soo dhaweyneyno cashar ka caawinta hadii ay kordhineyso arda gaaraya hadefka waxbarashada oo ay waxbaranayaan. Laakiin waxaan ka digney in farqiga maanta jira ay uga sii darto oo uu noqoto wax mahiim ah in la helo cashar ka caawin, ayey tiri Anna Ekström agaasimaha guud ee hey'ada iskuulka.